“Chikonzero chekuti tiite zvidzidzo izvi, takahoona kuti mabasa akupera, vashandirwi vanongotiita madiro aJojina, nhasi wadzingwa mangwana madzingwa mese. Kana vekumatara vakatiti ivo vakadzingwa nenyaya dzanaZUVA idzi hapana kana sendi rimwe ravachawana remudyandigere, takaona kuti a-a zvakakosha kuti isu sevatori venhau tionewo nzira dzatingashandisa kuti tizvishandire kwete kuti …
Guwerere remabhuku rinodaidzira hwaro hwezvinyogwa zvichaumba nhaurwa dzezvemabhuku neupfumi izvo zvichaitwa kupera kwaChikunguru zvichipinda mukutanga kwaNyamavhuvhu. Zvinyorwa zvinotarisirwa kunge zviri zvinechekuita nekuti mabhuku aiitise vakaanyora, vanoatsikisa, nevanoatengesa mari inoraramisa mhuri nekuunganidza upfumi. Misoro yenyayadzichange dzichikurukurwa munhaurwa dzichiturwa paIndaba yegore rino inosanganisira zvinotevera pazasi apo mutsamba yakabva kunasachigaro weBhodhi yeZimbabwe International Book Fair Association (ZIBFA)rinova sangano rinofambisa hurongwa hweguwerere remabhuku muZimbabwe. Dear Stakeholder We would appreciate the circulation of this Call for Abstracts to your colleagues. ZIBF INDABA 2017 CALL FOR ABSTRACTS On behalf of the Executive Board of The Zimbabwe International Book Fair Association, I wish to advise that the approved Theme for 2017 is – “Making the Book Pay!”. We are, therefore, pleased to announce that the dates for The Zim…
Senzira yekunyoresa kudzidzwa kwadzo mbira, Muzavazi akaita kuti mudzidzi anakirwe …